ဆေးပြားအမှားများ - ကောင်းမွန်သောအမှားအယွင်းများလော။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်နိုင်သည် - ဥယျာဉ်တော်ပိုးမွှား
ဆေးပြားအမှားများ - ကောင်းမွန်သောအမှားအယွင်းများလော။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်နိုင်သည်
ဆေးပြား bug များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဆေးပြား bug များ၏ဘဝသံသရာ
ဆေး bug များအတွက်နေရာများ
ဆေးပြား bug တွေဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ
ဆေး bug များကိုတားဆီးခြင်း
Q: ဆေးတောင့်တွေကိုက်နေသလား။ ဆေးပြား bug များသည်လူသားများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသလား။
Q: ဘာဆေးလုံး bug တွေစားတာလဲ။
Roly poly, doodle bug (သို့) pill bugs …သင်ခေါ်လိုက်သမျှကတော့သူတို့ဟာလူကြိုက်များတဲ့ဥယျာဉ်မှူးလေးများဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များသည်သူတို့နှင့်အတူဆော့ကစားကြသည်၊ ဘောလုံးအနည်းငယ်ထဲသို့လှိမ့်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖားနှင့်ပုတ်သင်ညိုများသည်သူတို့ကိုအရသာရှိသောအရသာရှိကြောင်းတွေ့ရှိကြသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနှံ့အပြားမှာသာမကနိုင်ငံရပ်ခြားမှာပါတွေ့နိုင်တယ်။
သို့သော်ဥယျာဉ်အပြင်ဘက်ရှိအပေါင်ပစ္စည်းများသည်ပြproblemနာတစ်ခုလော။ ဥယျာဉ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားများသည်သူငယ်ချင်းလား၊ ရန်သူလားများသောအားဖြင့်လူတွေကမကြာခဏမေးတတ်ကြသည်။
နက်ရှိုင်းစွာအတွက်ဆန်းစစ်ကြပါစို့ ငါသူတို့ကိုသင်အမှန်တကယ်ပြproblemနာနေထိုင်သူဖြစ်လာမှကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကူညီလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့သူတို့ခြံသင့်ရဲ့အချို့သောဝေမျှမှအကျိုးရှိသောထို့အပြင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။
အစားအစာအဆင့် Diatomaceous ကမ္ဘာမြေ
Monterey Sluggo Plus အား
ဘုံအမည် (များ) ဆေးပြား bug များ, pillbugs, ဘုံ pillbug, roly poly, doodle bug တွေ, မျိုးစေ့ကိုကြဲ bug တွေ (ဆက်စပ်ပေမယ့်တူညီမဟုတ်)
သိပ္ပံအမည် (များ) Armadillidium vulgare (မျိုးစေ့များကြဲခြင်းသည်ကွဲပြားသော်လည်းအမျိုးအစားနှင့်ဆက်နွယ်သောမျိုးစိတ်၊ Oniscus asellus)
ထိခိုက်သောအပင်များ ပျက်စီးသွားသောအပင်များကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သို့သော်ပုပ်နေသောအပင်များမရလျှင်ပျိုးပင်အပင်တစ်သျှူးသို့မဟုတ်သစ်သီးများကိုစားလိမ့်မည်
ဘုံကုစား အစားအစာတန်း diatomaceous မြေကြီး, neem ရေနံ, spinosad မှုန်ရေမွှားသို့မဟုတ်ငါးစာရရှိနိုင်ပါသည်။ ပျိုးပင်များကိုအိမ်သာစက္ကူပြွန်များဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးသည်။ သူတို့ကိုဆွေးမြေ့ပျက်စီးစေသောအပင်များဖြင့် လိုက်၍ လိုက်၍ ပြောင်းခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ဆွေးပုံသို့ရွှေ့ပြောင်းလျှင်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောအညစ်အကြေးကင်းစင်သည့်ဥယျာဉ်နေရာများကိုထိန်းသိမ်းပါ။
roly poly bug တွေသို့မဟုတ် pill bug တွေ။
ပထမ ဦး စွာအဘယ်အရာကိုဆေးလုံး bug တွေဖြစ်ကြပြီးအဘယ်အရာကိုသူတို့မကျော်သွားကြကုန်အံ့။
အများအားဖြင့်ဆေးလိပ်သို့မဟုတ်ဆေးကြောထားသော bug, Armadillidium vulgare, သည်သစ်သားထည်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Woodlice ၏ Armadillidiidae မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သူတို့ကဘောလုံးထဲသို့တက်လှိမ့်ကြောင်း bug ကိုအမျိုးအစားပါပဲ။ ၎င်းသည်သူတို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ပေးသည်။
Pill bug များသည်မျိုးစေ့ကြဲသည့် bug, Oniscus asellus နှင့်မကြာခဏရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည်။ မျိုးစေ့ချို့တဲ့သည့် bug များသည် Oniscidae (သို့မဟုတ်) သစ်သားသန်းမိသားစု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအမှားအယွင်းများနှင့်မတူဘဲ၎င်းတို့သည်လုံးဝကိုလှိမ့်။ C-shape ပုံစံကိုအစားထိုးနိုင်သည်။
ဆေး bug နှင့် bug bug နှစ်ခုလုံးသည်ဆက်နွယ်နေပြီး Crustacea (သို့မဟုတ်) crustacean မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သူတို့ကအားလုံးမှာအင်းဆက်ပိုးမွှားမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကကျောက်ပုစွန်၊ ကဏန်း၊
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီ crustaceans တွေဟာအပြင်ဘက်မှာနေတဲ့သူတွေပဲ။ သူတို့ရှင်သန်ရန်အစိုဓာတ်များစွာလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်နေထိုင်ရန်လုံခြုံပြီးစိုစွတ်သောနေရာများသို့ ဦး တည်လေ့ရှိသည်။
ဆေး bug နှင့်မျိုးစေ့ချ bug နှစ်ခုလုံးကိုမကြာခဏရှုပ်ထွေးရသည့်အကြောင်းကောင်းရှိသည်။ နှစ် ဦး စလုံးတူညီသောအခြေခံကျက်စားရာနေရာနှင့်အစားအစာအရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေကြပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိနေရာများတွင်တွေ့ရသည်။ နှစ်ခုလုံးကိုတူညီတဲ့နည်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။
အဆိုပါမျိုးစေ့ကိုကြဲ bug ကို, Oniscus asellus, ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်တက်ဘောလုံးလို့မရပါဘူး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးဆေးလုံး bug သည်ဥများစွာကိုတင်လိမ့်မည်။ အင်းဆက်ပိုးမွှားအများစုနှင့်မတူဘဲဤဥများသည်သူနှင့်အတူရှိနေသည်။ အမျိုးသမီးဆေးပြား bug များတွင်ဥများကိုကာကွယ်ထားသည့် marsupium ဟုခေါ်သည့်အိတ်တစ်လုံးရှိသည်။
ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်မှခြောက်ပတ်အထိသူမဥနှင့်အတူသယ်ဆောင်သွားမည်။ သူတို့ပေါက်လာသောအခါမိဘများနှင့်တူညီသော်လည်းသေးငယ်သောပုံစံဖြစ်သည်။ ပေါက်ပြီးနောက်, ကလေးဆေးလုံး bug တွေနောက်ထပ်စုံတွဲတစ်တွဲလအတွင်း၎င်းတို့၏မိဘ၏အိတ်ထဲ၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဆေးတောင့်တင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်အလှည့်ကျသောမာကြောသော exoskeleton သည်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှငါးကြိမ်မှခြောက်ကြိမ်အထိသုတ်သင်ရမည်။ ဒါကအဆင့်နှစ်ဆင့်ပါ။ ပထမ ဦး စွာ roly poly က၎င်း၏ခွံ၏နောက်ကျောတစ်ဝက်ကိုသွန်းလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုပြုပြင်ပြီးတာနဲ့ရှေ့တစ်ဝက်ကိုသွတ်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
ဆေးမင်ကြောင်အမှားများသည်လူကြီးဘဝသို့ရောက်ရန်တစ်နှစ်ခန့်ကြာသည်။ သူတို့ကအကြောင်းကို4လအရွယ်မှာသူတို့ရဲ့မိခင်ရဲ့အိတ်စွန့်ခွာပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်မိဘသည်တစ်နှစ်လျှင်မျိုးဆက်သုံးဆက်အထိထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ဥအသစ်တစ်မျိုးကိုဥနိုင်သည်။
ဤသေးငယ်သော crustaceans များအတွက်ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာသုံးနှစ်ဖြစ်သည်။ အခြားဥယျာဉ်မှူးများကဲ့သို့လျင်မြန်စွာမျိုးပွားနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းထိုအချိန်တွင်ငယ်ရွယ်သူများစွာရှိသည်။
ကိုယ့်တက်မှစတင်မှတစ် ဦး ကဆေးလုံး bug ကို။
သင်၏ဥယျာဉ်တော်၏အမှောင်ထုနှင့်အကာအကွယ်မဲ့နေရာများတွင်၊ သင်ဆေးတောင့်များမကြာခဏတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်စိုစွတ်သော၊ မှောင်မိုက်။ ပြိုကွဲနေသောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်နေသောနေရာများကို ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုကျွေးမွေးလိုသည့်သားကောင်များထံမှအကာအကွယ်ပေးလိုကြသည်။
ဆေး bug bug များသည်မြေဆီလွှာနှင့်နီးကပ်စွာနေလို။ အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါက၎င်းကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာရေတိမ်ပိုင်းအိပ်ရာပေါ်မှာတောင်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ သို့သော်၎င်းကိုမြေပြင်အဆင့်တွင်တွေ့ရှိရန်ပိုများသည်။
သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်အတွင်းရှိအပျက်အစီးများကိုမရှင်းလင်းနိုင်ပါက၎င်းသည်ဆေးယဉ်ပါးသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒါဟာအစားအစာပါပဲ, အမိုးအကာရဲ့, နှင့်ဆေးလုံး bug ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောပဲ! သူတို့ကဆွေးလိပ်ခေါင်းသို့မဟုတ်အပျက်အစီးများစုဆောင်းရာအခြားနေရာများတွင်လည်းဘုံပါပဲ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်သင်၏အိမ်အတွင်း၌အကာအကွယ်ယူနိုင်သည်။ သင့်တွင်စိုစွတ်သောတည်နေရာရှိပြီးသင့်အိမ်နှင့်အခြားပြproblemsနာများကိုအချက်ပြနိုင်မှသာဤသို့ဖြစ်မည်။ ရေယိုစိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပုပ်နေသောသစ်သားသည်အနည်းငယ်သော visitors ည့်သည်များထက်များစွာပိုဆိုးနိုင်သည်။
တစ် ဦး ကအများအားဖြင့် balled ဆေးလုံး bug ကို။ အဆိုပါ exoskeleton အလွှာသည်နှင့်ကွေးခွင့်ပြုသည်။
ဆေး bug များသည်သဘာဝအမှိုက်သရိုက်များစွန့်ပစ်ခြင်းစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ယိုယွင်းနေသောအပင်များစားသုံးခြင်းကြောင့်သူတို့သည်ဆွေးပုံထဲတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာတွင်ဆေးကောင်များနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမျိုးစေ့ချခြင်းများသည်အပင်သေကောင်များကိုသာထိတွေ့နိုင်သည်။ အို၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည်စုံလင်ခြင်းနှင့်ဝေးလှသည်။ အခြားအစားအစာများမရှိပါကသက်ရှိအပင်များသည်နောက်ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
စတော်ဘယ်ရီကိုစားသောပန်နေတဲ့ပိုလီဟာအနည်းငယ်ထူးဆန်းပုံရပေမယ့်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ များစွာသောပတ်ပတ်လည်ရှိပါကမြေပြင် -Level အသီး pillbug အစားအစာအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်။ နူးညံ့။ နုသောပျိုးပင်များလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
လုံး ၀ balled, ဒီဆေးလုံး bug ကိုခုခံကာကွယ် mode မှာဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်ဥယျာဉ်တွင်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်တွေ့ရသောပမာဏတွင်ဆေး bug bug များသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့သူတို့ခဲမှာအားလုံးသတိထားမိပါတယ်။ သူတို့ကိုအပေါ်သို့စားသောက်ရန်အဘို့အဆွေးမြေ့ပစ္စည်းတစ်ခုများစွာသောများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ pillbug လူ ဦး ရေကအဓိကပြissueနာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းမြင့်တက်လာသောအခါပါပဲ။ သင့်တွင်လူ ဦး ရေများပြားပါကပြိုလဲသောအပင်များ၏အပျက်အစီးများကိုအလျင်အမြန်စားသုံးနိုင်သည်။ ပြီးတော့ရုတ်တရက်၊ မင်းရဲ့အပင်တွေဟာနောက်တစ်တန်းကျသွားတယ်။
ဤသည်ဆေးလုံး bug ကိုမကောင်းတဲ့ဥယျာဉ်၌နေသောသူမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့, ကြီးမားသောလူ ဦး ရေများသောအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဆန်းဖြစ်ကြသည်။ အစားထိုးပေးလျှင်, သူတို့သည်မကြာခဏတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအပင်လျစ်လျူရှု, ညာဘက်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။
ဤရွေ့ကားအနည်းငယ်သာ roly-polies လည်းသင့်ရဲ့ဥယျာဉ်တော်အဘို့အကြီးမြတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ် ဦး ဆွေးပန်ကာဖြစ်လျှင်, သင်သည်သင်၏ပုံထဲမှာသူတို့ထဲကတစည်းချင်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်စက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများကိုအလျင်အမြန်ဖြိုခွဲနိုင်သည်၊ ဤသည်တလျှောက်ဆွေးဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှ။
ဒီတော့သူတို့မကောင်းတဲ့အိမ်နီးချင်းများလား ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆာလောင်နေပြီးအစားအစာလိုတယ်။ သငျသညျအခြားရွေးချယ်စရာအရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးလျှင်, သူတို့သည်အစားသူတို့ကိုစားလိမ့်မယ်။ သင်မပြုလုပ်ပါကသင်၏အပင်များသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
အရွက်၏အစွန်းပေါ်တွင်အစာကျွေးတစ် ဦး ကဆေးပြား bug ။
သင်၏ခြံအတွင်းရှိဆေး bug များ၏ကျက်စားရာနေရာများကိုသင်လုံးဝဖယ်ရှားလိုမည်မဟုတ်ပါ။ ဥယျာဉ်၌ဆေးပြား bug များကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကိုသွားကြစို့။
အစားအစာတန်း diatomaceous မြေကြီးတပြင် အရိုးရှင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Diatoms အခွံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမှုန့်များသည်ဆေးချို့ယွင်းမှုများ၏အောက်ဘက်ရှိနူးညံ့သောအစိတ်အပိုင်းကိုဖျက်စီးလိမ့်မည်။ ဒါဟာအပင်သို့မဟုတ်လူသားများအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ သူတို့ဖြတ်ကျော်။ မရသည့်နယ်နိမိတ်ဖြစ်စေရန်အပင်များ၏အခြေအမြစ်ပတ်လည်တွင်ဖြန်းပါ။
ဆီယူပါ အရမ်းကာကွယ်နိုင်အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားပိုးမွှားများကဲ့သို့ပင်ဆေးတောင့်များသည် neem ၏အရသာကိုသဘောမကျကြသဖြင့်၎င်းအားဖျားနာလာလိမ့်မည်။ ဒါဟာ roly polies များအတွက်ပျော့အဆိပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါတို့အဘို့အလုံခြုံ!
သင့်ရဲ့အပင်ပတ်လည်မှာကြီးမားတဲ့လူ ဦး ရေရှိတယ်ဆိုရင်, လုပ်ဖို့ပိုပြီးအကြီးအကျယ်ခြေလှမ်းများ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Spinosad မှုန်ရေမွှား Monterey ဥယျာဉ်အင်းဆက်ပိုးမှုတ်ဆေး ပိုလျှံဆေးလုံး bug တွေပယ်သတ်ပစ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခရမ်းချဉ်နှင့်ပက်ကျိငါးများကိုသင်၏အပင်များမှအာရုံသို့ဆွဲဆောင်ရန်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဥယျာဉ်ကို Safe ပက်ကျိ & ခရုငါးစာ ဒါမှမဟုတ် Sluggo Plus အား နံပါတ်များကိုလျှော့ချဘို့ကောင်းသောအစီအမံဖြစ်ကြသည်။
နေရာချထားရေး ပျိုးပင်ပတ်လည်အိမ်သာစက္ကူပြွန် ဆေးမင် bug တွေကိုသူတို့ဆီမရောက်အောင်တားဆီးပေးတယ်။ ဖယ်ရှားခံရအောက်ခြေနှင့်အတူပလပ်စတစ်ခွက်များအလားတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ပြွန်များလိုပဲမဖြိုဖျက်ကြဘူး။
သင်လုပ်နိုင်သည် ငါးစာနှင့်ဆေးလုံး bug တွေကိုရွှေ့ အခြားတည်နေရာ။ သင်၏ဥယျာဉ်၌စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသေးသေးလေးများကိုစုံတွဲတစ်တွဲထားပါ။ ပြိုကွဲသောအရွက်, ပြောင်းဖူး cobs သို့မဟုတ် cantaloupe ၏တစ်ဝက်ပင်သူတို့ကိုဆေးလုံး bug တွေဆွဲပါလိမ့်မယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်အမှိုက်များကိုကောက်ယူ။ အခြားနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ရန် bug များကိုစုဆောင်းပါ။
အကယ်၍ ဖရဲသီးသို့မဟုတ်အခြားသစ်သီးပင်များကြီးထွားလာလျှင်၊ သစ်သီးများကိုမြေဆီလွှာများမှဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်ပံ့ပိုးမှုပေးသည် ။ ဥပမာအားဖြင့်ဖရဲသီးသည်သစ်သီးများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်တီရှပ်အဟောင်းမှပြုလုပ်ထားသောလောက်လွှဲသို့မဟုတ်ကြိုးပုခက်ရှိနိုင်သည်။ စတော်ဘယ်ရီသီးနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ဆွဲထားနိုင်အောင်ကျဉ်းမြောင်းသောကျင်းထဲမှာစိုက်နိုင်ပါတယ်။
တစ် ဦး ရေပိုက် reel သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
ဆေးတောင့်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအောက်ရှိအပင်များကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အပင်များချိတ်ဆွဲဆွဲထား သို့မဟုတ်တစ် ဦး ပေါ်သို့သူတို့ကိုချပြီး ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင် bug တွေကိုတားဆီးလိမ့်မယ်။ သင်၏အပင်သို့သွားသောလမ်းတွင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်ဆေးတောင့်သည်အစိုဓာတ်လိုအပ်သကဲ့သို့၎င်းသည်သဲကန္တာရကိုသူတို့၏လမ်းပေါ်သို့ ဦး တည်စေသည်
အဲဒီအစားသူတို့ကိုသင်၏ခြံ၏ဆွေးသောအဘို့ကိုခွဲခြား။ Pill bug များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆွေး bug များနှင့်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ သင်သည်အရွက်မှိုများကိုပြုလုပ်နေပါကသို့မဟုတ်ပုံမှန်ပုံသို့မဟုတ်အမှိုက်ပုံးတစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားပါကထိုအမှားများကိုသင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုကောင်းကောင်းရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သူတို့ကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာနေခွင့်ပေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏မြက်ခင်း၏အနားတစ်လျှောက်တွင်ပုန်းကွယ်နေသောဆေးပြား bug များသည်မြက်ကိုကိုက်ခဲစေနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်သတိမထားမိပါ။ အပင်များမရှိသောသစ်ပင်များအောက်တွင်နောက်ထပ်ကြီးကျယ်သောနေရာတစ်ခုရှိသည်။
ဆေး bug များနှင့်မျိုးစေ့ချ bug နှစ်ခုစလုံးသည်တူညီသောထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်လုံးဝမဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး။ ဆေး bug တွေမကိုက်ဘူး၊ သူတို့က (သူတို့ပုပ်, စိုစွတ်သောသစ်သားနေအိမ်သို့တက်ယူစေခြင်းငှါပေမယ်), ခြင်လုပ်ပေးတူတူညီသောလမ်းအတွက်သစ်သားပိုးကြဘူး, သူတို့ကအင်းဆက်ပိုးမွှားကဲ့သို့အဝတ်အစားသို့မဟုတ်အစားအစာကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပါဘူး။
ကလေးတွေတော်တော်များများမှာတကယ်ကိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဆေးလုံးတွေရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုသိပ်လုံခြုံတဲ့အတွက်သိပ္ပံနည်းကျမျှတတဲ့စီမံကိန်းတွေမှာသုံးကြတယ်။ အထူးသဖြင့်တင်းကျပ်တဲ့အကာအကွယ်ဘောလုံးတွေထဲကိုသူတို့လှိမ့်ဝင်သွားတဲ့အခါသူတို့နဲ့ကစားရတာပျော်စရာပါပဲ။
ဖြေ - ဆေး bug killer (သို့) sow bug killer လို့လူသိများတဲ့ပင့်ကူတစ်မျိုးရှိတယ်။ သူတို့သည်သဘာဝအလျောက်သဘာဝကျကျနေရာတိုင်းတွင်ဤ crustaceans များနှင့်နီးကပ်စွာတွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။
ပင့်ကူများမဟုတ်သည့်အပြင်အခြားသတ္တဝါများစွာသည်ပိုးမွှားများကိုစားလိမ့်မည်။ ဒီဥယျာဉ်အစာကိုအနှစ်တစ်ဆယ်လောက်၊ ဖားများ၊ ပုတ်သင်ညိုတွေလည်းအရသာရှိတယ်။ အစားအစာအတွက်အပြိုင်အဆိုင်များသောနေရာများတွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တောင်မှသားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ဆေးလုံး bug တွေသေချာပေါက်အခြားဥယျာဉ်ကိုနေထိုင်သူများကဲ့သို့အန္တရာယ်မရှိကြပေ။ ကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုဖြင့်သူတို့သည်သင်၏ဥယျာဉ်ကိုနောက်ထပ်အကျိုးပြုသည့်အရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင့်ခြံထဲမှာဆေး bug တွေရှိလား။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူပြproblemsနာရှိခဲ့ဖူးသလား သင့်ပုံပြင်များကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များဖြင့်ပြောပြပါ။
အပြာရောင်ကြယ်ပွင့် (laurentia fluviatilis)